Yurubta Galbeed - Howling Pixel
Yurubta galbeed (af-carabi: أوروبا الغربية, af-ingiriis: Western Europe) waa qaybta galbeed ee qaarada yurub, taasoo kulansanaysa : isbayn, burtuqiiska,faransa, talyaaniga, Austriya, jarmalka iswiisarlaan, ingiriiska, ayrlaan, [ Luxembour], denmark, holland, belgium, malta, vatican, Andorra, San Marino iyo Liechtenstein
yurubta Galbeed (midabaka oranjiga) iyo koonfur galbeed yurub (midabka oranjiga tiqda ah), sida laga soo xigtay CIA.
Andalus (afcarabi: الأنْدَلُس ingiriis: al-andaluus, loona yaqaanay aybeeria waa gobol ilbaxii muslimiinta laga taagay yurubta galbeed gaar ahaan hada dhulka loo yaqaan spain iyo Burtuqaal, waqtigii andalus ugu awooda badnayd waa qarnigii sideedaad ee miilaadiga, way balaaratay ilaa ay gaartay koofurta faransa, ereyga andalus waxaa loo yaqaan dhulkii khilaafada islaamku qabsatay, iyo dhulkii is-maamulada gadaal ka noqday ee ka go,ay awoodii dhexe ee dawladii khilaafadii alumawiya sanadku markuu ahaa 132-913 hijri ku beegan 711-1492 miilaadi markay andalus ku dhacday gacantii reer yurub muslimiintina laga saaray, iyadoo ay jirto in xuduuda andalus marba ay si isku badalaysay. marna ay yaraanaysay marna weynaanaysay. taasoo loo tiirinayo dagaaladii muslinka iyo gaalada dhex marayay, oo guushu marba dhinac jirtay.
Shan baa loo qaybiyay andalus furashadii muslimiinta ka dib markay ku sugnaatay xukunkii islaamka, qaybahaas oo kala ahaa:
Sida Qaramada Midoobay sheegtay wadanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay "wadanada ugu liita dhaqaalaha caalamka". Inkastoo 20neeyo sano oo dagaal sokeeye ahi curyaamisay dhaqaalaha iyo koboca wadanka, hadana dadka Soomaalida waxay sameeyeen dhaqaale dadban, kaasi oo ku salaysan xoolaha nool, xawaaladah iyo isgaarsiinta.Sida ay sheegtay Bankiga Aduunka, dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay ilaa $4.1 bilyan sanadkii 2001da. Sidoo kale sanadkii 2009, Hay'ada Sirdoonka Maraykanka (CIA) waxay xustay in iskuceceliska iyo soo saarka guud ee wadanku gaadhay ilaa $5.731 billion, taasi oo ku socota xawaare koritaan ah 2.6%.
waxaanu u baahanahay dareraha xabagta geedka maraaga (Af-Carabi: لبان; Af-Ingiriis: Frankincense) magaca Saynis: Boswellia Carterii, waa xabag ama caano geed , qayb ka mida luubaanta ayaa la calaaliliyaa guryahana waa lagu uunsiyaa iyadoo leh caraf heer sare ah, waxaa kaloo loo adeegsadaa daawo dhaqameedka, Luubanta waxaa aad loogu yaqaanaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo kuwa carabta. Luubaanta waxaa lagu shidaa Dabqaadka oo laga sameeyo dhagax khafiif ah sida burjikada.
luubaanta ayaa noocyo badan leh waxaana geedka luubaaneedku soo saaraa ilaa sadex mar sanadkii, meelaha uu ka baxo geed luubaaneedka ugu qaalisan dunida ayaa ah woqooyi bari soomaaliya , cumaan iyo yaman, waxaa kaloo laga hela jasiirada soqodra ee ku aadan woqooyi bari soomaaliya, ganacsi ayaa ka dhexayn jiray soomaalida iyo faraacintii luubaanta ku salaysan, dhulkii uduga ayaa lagu magacaabi jiray dhulka soomaalida,